ODUU AMMEE! “Odeessa Kessaa Miliqxee Baate. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsODUU AMMEE! “Odeessa Kessaa Miliqxee Baate.
ODUU AMMEE! “Odeessa Kessaa Miliqxee Baate.
“Odeessa Kessaa Miliqxee Baate.
Tibba darbe kanneen ABO keessaa maqan Miseensota Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO Araarsoo Biqilaa fi Jabeessaa Gabbisaa dabalatee, Miseensi Gumii Sabaa ABO ‘Captain’ Xilahuun Bantii jedhamu, ‘sobaa fi sossobbaa dantaatiin nu gowwomsuu dhaan dhaaba umrii keenya keessatti dadhabne keessaa nu baasuun ummata keenya keessatti seenaa gurracha akka hojjannuuf murni nu dirqisiisu jiraachuu hin qabu’ jechuun Wwalgahii guyyaa hardhaa marii biyyaalessaa (Building a Democratic system In Ethiopia : Towards a Culture of Dialogue and Peaceful relationships) jedhu kan guyyaa lamaaf taa’amaa jiru Onkoloolessa 30-31/ 2020 irraa hirmaachuu diduutu dhagahame.
Akka odeessi keessa beektota irraa nu dhaqqabe addeessutti, murnoonni ABO irraa kophatti bahuun Hoteela Hiltonitti labsatanii turan kunneen namoota sadiin kana waan nu godhaa jenne hin gootan, nu faana hiriirtanii akka nu jennetti hin deemtan yoo ta’e isin hiisifna; mana tokko keessa waliin hin jiraannu, maallaqni mootummaa nyaataa turre kophaa keenya osoo hin taane waloodhaan nyaanne waan ta’eef, dirqama mootummaan hunda keenyatti kenne bahachuun Ethiopia tokkomte jalatti ummanni keenya gurmaayee karaa kanaan mirga ummata keenyaa akka kabachiifnuuf paartii biyya bulchu faana taanee hojjachuu qabna! kana nu faana hin gootan taanaan isintu lubbuu keessanitti murteesse jechuun itti dhaadataa jiran.
Beekaa haa ta’uu wallaalaan, badii jarri balleessaniif, gaafatama seeraa fi seenaa jalaa akka hin baane itti himaa. Ummanni keenya namoota akka Daabboo Difoo irraa fi jalaan ibidda jiddutti ukkaanfamee, dantaa fi sirna shifaata jiddutti ukkaanfame kanneen bira dhaabachuun gargaaruu qaba jenna.
Hubannoodhumaaf, seenaan jarreen dadan kanaa:-
1. Araarsoo Biqilaa:- Itti Anaa HD ABO kan ture nama Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn durfamu keessatti umrii ijoolummaa isaa irraa kaasee hanga dirreetti lolee lolchiisuutti qooda Qabsoo kennaa ture, hiriyaa Guutamaa Hawaas jeyna daraboo hin qabne kan hanga har’aatti miila isaa keessatti rasaasa baatee deemaa jiru dha. Dabalataan gaafa ABOn kan Wallaggaati, Walaggaan malee ofitti hin butanii nama naannawa biraa ni ajjeesan jedhanii holola rakasha Oromoo fi Qabsaawota Oromoo bakka hin buune oofaa turan nama ‘mee ani duran dhaqaati, yoo na ajjeesan narrratti laaltanii haftuut na hordofaa’ jedhee jalqaba Asmaraa Eertiiriyaa dhaqe dha. Namni kun amma maatii isaa facaasee ummanni Oromoo maatii isaa bakkayyuu walitti qabeefii jiraachisaa ture, nama garraamii sobaa fi sossobbaa diinaa fi lukkeelee diinaatiin dandii irraa maqe dha.
2. Jabeessaa Gabbisaa:- Namni kun Miseensa Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO itti gaafatanmaa Damee Dantaa Siyaasaa ture. Jabeessaan umrii isaa ijoolummaa irraa jalqabee nama umrii jireenya isaa guutuu SUDAAN, YUGAANDAA, KEENYAA, SOMAALIYAA fi EERITIIRIYAA keessatti fixee dha.
Qabsoo kanaaf jecha nama dhalallee osoo hin godhatiin hardha gahe, nama dantaatiin sobamee dhaaba keessa maqe, kan ammaan tanatti sababa inni dhaaba isaa keessaa maquu fi ummata isaa biratti jibbamuu baree gaabbee fi diinaa fi lukkeeleen diinaa albee itti qarataa jiranii dha
3. Balaliisaaa/’Captain’ Xilahuun Bantii Miseensa Gumii Sabaa ABO ture.
Nama beekumsa, ogummaa fi dandeettii qabuun dhaaba kana jiraachisuuf jecha sirna Darguu keessaa xiyyaara balaliisu ogummaa jabaa moggaatti gatuun ABOtti dabalamee dirqama dhaabni isaa itti kennaa ture cufa dadhabe, hifadhe osoo hin jedhiin bahataa turee dha. Har’aan tana sababa inni shira diinaa fi lukkeelee diinaatti dammaqeef ableen qaramaafii jira.
“Aare jedhanii yoo keessaa fuudhan mara dhaama “ waan ta’eef namoota armaan olitti maqaan isaanii tarrifame sadan Oromoon akka sabaatti yeroon itti ablee diinaa jalaa baraaru amma!”
Ummanni waan kanarrattj yaada isaa bilisaan kennachuu ni danda’a.
Garee Dammallaashotaa keessaa isaan kun sadeen “badiin keenya tahuu amannee ummata Oromoo fi ABO dhiifama gaafanna” jedhaa jiru.
Toleeraa Adabaa fi Bilisummaa Alamaayyoo.
Moyibul biluu qawwee kun tika biyyaalessaa xoophiyaa (ENSA) fi hojii oromaaraa kana walitti qabee hojjechuun itti hin ulfaatuu?
Tokkicha Qeerroo Hoteela Hilton
Dammallaashonni, fiinyaawwan hoteela Hilton sun waan Abbay fi waan Abiy irratti mari’achuuf Adaamaa tataayu! Gantuu fi sareen qixuma, hambaa argattus hin diddu!
The GREAT & Primordial Agaw Nation of Black African Kushites NEVER accept living under Amhara slavery
Ilmaan Oromoos gara WBOtti fiiguu qofatu isin baasa!!